Mayelana NATHI - UNIKE Technology Limited
Onjiniyela bethu baneminyaka engaphezu kwengu-10 yokuhlangenwe nakho kwe-LED futhi ithimba lethu lokuthengisa elinokwethenjelwa lizokunikeza ukwesekwa nezobuchwepheshe ezisezingeni eliphakeme ukukusiza ukuthi wandise imakethe yakho kalula futhi sikuqinisekise ngokuhlangenwe nakho kwebhizinisi okumnandi. Sinokulawulwa kwekhwalithi okuhle kakhulu kuzo zonke izigaba zokukhiqiza, kufaka phakathi ukulawulwa kwezinto ezizayo, ukuqapha kwekhwalithi ekuqhubekeni, ukuhlolwa okungaphandle nokuhlolwa okuhlobene. Ngaphezu kwalokho, singasungula ukulawula kwe-AQP ne-SPC ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Konke lokhu kusenza sikwazi ukuqinisekisa ukwaneliseka kwamakhasimende. Ifektri yethu ifakwe kahle ukulingana nezidingo zakho zokukhishwa kwabasebenzisi, ezinhlobonhlobo, ulwazi olucebile nomqondo ophakeme womsebenzi we-QC yethu, singanciphisa zonke izindleko ezingadingekile kuwe. Impumelelo yethu inqunywa ukwaneliseka nokuzethemba kwamakhasimende ethu kulokho esikwenzayo nokuthi sikwenza kahle kangakanani.
Sikhetha ngokucophelela zonke izinto futhi siqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo eqediwe kumakhasimende ingahlangana futhi iphakeme ngaphezu kokulindelwe. Sisebenzisa kakhulu i-LED evela kuma-Lumileds, i-Osram neCree, ukunikezwa kwamandla kusuka ku-Mean Well, i-Philips, i-Inventronics, i-Sosen, i-Lifud ne-Done, kanye nomkhiqizo wethu we-UNIKE. Sekukonke, imikhiqizo yethu ingahlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zamakhasimende ahlukahlukene kusuka maphakathi nendawo kuya emakethe ephezulu. Iningi lemikhiqizo yethu linganikeza ngeminyaka emithathu kuya kwemihlanu yesiqinisekiso samakhasimende ongakhetha kuwo. Ngasikhathi sinye, singakwazi futhi ukwenza ngezifiso imikhiqizo ngokuya ngezidingo zamakhasimende ukunweba isiqinisekiso sekhwalithi noma isikhathi sokuphila siye eminyakeni engu-7 noma eyi-10.
Singahlinzeka ngamasevisi e-OEM ne-ODM kumakhasimende. Singakwazi ukwenza i-OEM noma senze i-LOGO laser mahhala, futhi futhi singenza ngokwezifiso ibhokisi lombala.
Inhloso ye-UNIKE "Ikhwalithi yokuqala, eyenzelwe iKhasimende, ukwethembana, inkampani efanelekile".
Inkampani yethu inezitifiketi eziningi zobunikazi bomkhiqizo, iningi lemikhiqizo yethu yi-CE, RoHS, PSE, SAA kanye ne-UL, futhi i-DLC ivunyelwe, esithengiswe emazweni angaphezu kwekhulu emhlabeni jikelele, futhi yazuza udumo oluningi lwamakhasimende , kanye namakhasimende amaningi ukusungula ubudlelwano bokusebenzisana obuzinzile besikhathi eside.